Yaa la dejin doonaa goobihii laga saaray masuuliyiinta ee Madaxtooyada Somalia-xog cusub – Warfaafiye:
Yaa la dejin doonaa goobihii laga saaray masuuliyiinta ee Madaxtooyada Somalia-xog cusub
Ali Mohyadin Aug 12, 2017 0
Agaasimaha guud ee xafiiska madaxtooyada Somalia oo dhawaan ku amray madaxda iyo hay’addaha dhex degan xarunta madaxtooyada ayaa kasoo baxaysa xog ku saabsan cidda la dejin doono marka ay mas’uuliyiinta laga wada saaro Villa Somalia.
Xogta cusub ee aan helnay ayaa sheegaysa in la dejin doono xarunta madaxtooyada hay’adda sirdoonka Qadar.
Hay’adda sirdoonka qaranka Qadar ayaa waxay ka caawin doontaa hay’adda nabadsugida iyo sirdoonka NISA sidii loo casriyeyn lahaa hawlaha sirdoonka qaranka iyo sidii loola socon lahaa isgaaarsiinta dadweynaha oo ay ku jiraan telefoonada iyo baraha bulshada ku sheekaystaan.
Waxaa jira heshiis cusub oo hay’adda sirdoonka qaranka Qadar iyo Dowladda Somalia dhex maray, waxaana ay keeni doonaan qalab cusub oo lagula socon doono isgaarsiinta iyo baraha bulshada.
Qalabkaan casriga ah waxay u baahan tahay in Madaxweynuhu uu toos ula socda howgalgelinteeda.
Qorshahaan ayaa waxaa dowladda Qadar kala hadlay agaasimaha guud ee madaxtooyada Fahad Yaasiin oo aad ugu dhow dowladda Qadar, lana og yahay inuu ka danbeeyay isku xirkii madaxweyne Farmaajo iyo Qadar xiligii lagu jiray ololaha doorashada oo ahey ishii uu Farmaajo ka helay taageerada dhaqaale ee uu kusoo baxay.